Mikiry ho amin’ny ahitana ny fiteny Dagbani bebe kokoa an-jotra ny mpikatroka nomerika Ghaneana · Global Voices teny Malagasy
Olona 3.000.000 eo ho eo no mampiasa ny fiteny Dagbani
Voadika ny 13 Avrily 2021 3:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Français, English
Mpikatroka nomerika Ghaneana, Sadik Shahadu. Sary nomen'i Sadik Shahadu ary nahazoana alàlana.
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Manomboka amin'ny 6-13 aprily 2021, Sadik Shahadu no handray ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang izay manadihady ny fomba fampiasana ny teknolojia hamelomana aina ireo fiteny Afrikana.
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2021,voambolana Dagbani mihoatra ny 4.000 no voarakitra ary nalefa tao amin'ny Wikimedia Commons ho ampahany amin'ny fanentanana hampitomboana ny fahitana ilay fiteny.
Vondron-teny ampiasaina manerana an'i Afrika Andrefana izay misy ny fiteny Dagbani ampiasain'ny olona manodidina ny telo tapitrisa any avaratr'i Ghana ny fiteny Mole-Dagbani.
Iray amin'ireo mpandrindra an'io tetikasa io i Sadik Shahadu monina ao Accra, Ghana. Ankoatra ny maha mpiara-manorina azy ny Vondrona Mpampiasa Dagbani Wikimedians, dia mpikambana ao amin'ny Open Leaders X sady Mozfest wrangler amin'ny Fetibe Mozilla 2021, ary ambasadaorom-paritra ho an'ny vondrom-piarahamonina indizeny amin'ny Zavakanto sy ny Feminisma ihany koa izy.
Niresaka tamin'i Shahadu i Adéṣinà Ọmọ Yoòbá ao amin'ny Rising Voices mba hampafantatra bebe kokoa momba ny asany mampiroborobo ny teny Dagbani amin'ny aterineto.
Adéṣinà Ọmọ Yoòbá (AOY): Manao ahoana ny toerana misy ny fiteninao ivelan'ny aterineto ankehitriny, sy amin'ny aterineto ihany koa?
Sadik Shahadu (SS):My language (Dagbani language) status is deficient on the internet, and it is almost impossible to get information written in Dagbani. For example, when you take Google, you can access Google in other languages like Hausa and Akan. There is nothing like that for Dagabni yet. Most media stations in northern Ghana do not have most of their TV and radio programmes available in Dagbani. Even with print media, I am yet to see any local newspaper written in Dagbani.
Sadik Shahadu (SS): Tsy hita firy amin'ny aterineto ny fiteniko (Dagbani), ary saika tsy hita ao mihitsy aza ny vaovao amin'ny teny Dagbani. Ohatra, afaka miditra amin'ny Google amin'ny fiteny hafa toa ny Hausa sy Akan ianao rehefa miditra amin'ny Google. Tsy mbola misy toa izany ho an'ny fiteny Dagabni. Tsy misy amin'ny fiteny Dagbani ny ankamaroan'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ho an'ny ankamaroan'ny fampahalalam-baovao any avaratr'i Ghana. Na ny fampahalalam-baovao vita printy aza dia mbola tsy nahitako gazety amin'ny teny Dagbani tao an-toerana.
Sarotra ny fidirana amin'izy ireo na dia misy aza ny loharanom-baovao Dagbani ivelan'ny aterineto sy ny fitaovana ianarana any amin'ny ankamaroan'ny tranombokim-panjakana any amin'ny sekoly sasany any avaratra. Raha fintinina, maro ny olona tsy tia manoratra amin'ny fiteniny toa ny Dagbani.
(AOY): Inona araka ny eritreritrao no fanamby lehibe atrehin'ny fitenin'ny vondrom-piarahamoninao raha miresaka serasera nomerika na famoronana votoaty nomerika amin'ny fitenindrazan'izy ireo ?
SS: Fanamby maro no misy raha ny momba ireo fitenin'ny vondrom-piarahamonina ao Ghana. Ho an'ny fiteny Dagbani, heveriko fa tsizarizary ny fomba fampianarana sy fianarana, indrindra any amin'ny ambaratonga fototra. Misy fiantraikany amin'ny ambaratonga hafa rehetra ny fahosana manomboka any amin'ny fotony. Ohatra, tsy mahazo fankasitrahana ny ankizy mahavita taranja tsara indrindra amin'ny fiteny Dagbani, tsy toy ireo izay mahavita tsara amin'ny taranja hafa. Ahoana ny fomba anantenantsika azy ireo ho liana bebe kokoa? Ka hoy aho hoe tsy mahasarika ny fomba fampianarana ny fiteny Dagbani.
Antony iray hafa ny teknolojia sy ny sehatra fanohanana. Tsy misy kitendry iOS maimaimpoana ho an'ny fiteny Dagbani amin'izao fotoana izao, ka manasarotra ny fanoratana litera Dagbani manokana amin'ny iPhone.
(AOY): Araka ny hevitrao, inona ny sasany amin'ireo dingana azo raisina handrisihana ny fitomboan'ny fampiasana ny fiteny amin'ny aterineto ?
SS: Mba hampitomboana ny fampiasana ny teny Dagbani na ny fiteny hafa ao an-toerana amin'ny aterineto, tsy maintsy mamerina mandinika ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fampianarana ny governemanta na ny sampam-panabeazana ao Ghana (GES). Ny sasany amin'ireo loharano ireo no nilaozan'ny toetr'andro ary tsy mahasarika.
Faharoa, tokony hisy ny loharano (famatsiam-bola) hafa hamoronana fitaovana fanabeazana nomerika bebe kokoa na loharano an-tserasera ahafahana miditra mora foana. Mety ilaina ihany koa ho an'ireo olona manana fidirana amin'ny aterineto voafetra ny loharano ivelan'ny aterineto toa ny fitaovana Internet-in-a-box.
Ary farany, tsy maintsy mampitombo fahalianana bebe kokoa isika amin'ny fandraisana anjara amin'ny Wikipedia Dagbani.
(AOY): Inona ny antony manosika anao voalohany hiasa hahita ny fiteninao sy ny kolontsaina mba ho hita amin'ny aterineto ?
SS:As an ambassador for indigenous communities, I am more interested in promoting my culture and the Dagbani language on the internet. It is important to do so by contributing contents from Ghana to Wikimedia projects like Wikipedia and Wikimedia Commons. I want to make information and knowledge more accessible in Dagbani so people who cannot read and write in English will also have access to them.
SS: Amin'ny maha ambasadaoro ahy ho an'ny vondrom-piarahamonina indizeny, liana kokoa amin'ny fampiroboroboana ny kolontsaina sy ny teny Dagbani amin'ny aterineto aho. Zava-dehibe ny fanaovana izany amin'ny alàlan'ny fandraisana anjara amin'ny votoaty Ghaneana amin'ireo tetikasan'ny Wikimedia toa ny Wikipedia sy ny Wikimedia Commons. Tiako atao mba ho hita bebe kokoa amin'ny fiteny Dagbani ny fampahalalam-baovao sy ny loharanom-pahalalana mba hahafahan'ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra amin'ny teny Anglisy miditra amin'izany ihany koa.